I-CRISTALLIN 13 - FR-1-356-233
Valmorel, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Agence Poplidays
U-Agence Poplidays unokuphawula okungu-1691 kwezinye izindawo.
Endlini yokuphumula kunombhede usofa kanye nombhede we-trundle.
Ikhishi emnyango lifakwe i-hob kagesi, i-oven, i-microwave
Ishawa. Ilokhi ye-Ski endaweni yokuhlala
Abaqashi abahlala kuleli fulethi ebusika buka-2018/2019 balinikeze isilinganiso esimaphakathi esingu-5.14/10
Indawo yokuhlala iCristallin itholakala ngokuphelele imindeni enezingane ezifunda e-ESF Skischool. Ngempela, indawo yomhlangano ingaphansi kwendawo yokuhlala. Futhi unokufinyelela okuqondile emithambekeni futhi ungakwazi ukufinyelela inkulisa ngemoto yeCable yase-Télébourg. Uzothola zonke izinsiza ezidingekayo eduzane: imakethe encane, isitolo sezemidlalo, indawo yokudlela.
I-"Hameau Mottet" iyindawo ekahle yabashushuluzi kanye neyemindeni ngoba itholakala eduze nomhlangano wesikole se-ESF Ski. Ungakwazi ukufinyelela enkabeni yesiteshi ngenxa yemoto yekhebula yase-Télébourg. Le ndawo yabahamba ngezinyawo ngokuphelele futhi inikezela ngendawo yokupaka engaphansi komhlaba (ukubhuka kuyancomeka)
Ngenxa yobhubhane lwe-coronavirus (COVID-19), izikhungo zinciphise amahora okwamukela kwazo namasevisi. Khumbula ukuthintana nabo (imininingwane yokuxhumana ikhonjisiwe ku-vawusha yakho yokuhlala) ngaphambi kokufika kwakho ukuze uhlole lezi zikhathi.
Ngokwengqikithi yobhubhane lwe-coronavirus (COVID-19), izikhungo njengamanje zisebenzisa izinyathelo zezempilo ezihlukile. Ngenxa yalokho, amanye amasevisi nezisetshenziswa kungase kwehliswe noma kungatholakali.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-1,691 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Abantu beSitudiyo 2, eduze kwemithambeka nesikole sokushushuluza.Isitudiyo esincane esihle, esilungisiwe futhi esihlotshiswe kahle. Ilungele abantu abangu-2.
Ibungazwe ngu-Agence Poplidays
Lesi sakhiwo siphethwe yi-ejensi yendawo yendawo, ukuqashwa kwamaholide okuchwepheshile,
umlingani wenkampani yethu yezokuvakasha i-Poplidays. Lesi sikhungo sizonakekela owamukelayo futhi
ngikuphelezele ngesikhathi sokuhlala kwakho.
umlingani wenkampani yethu yezokuvakasha i-Poplidays.…
Hlola ezinye izinketho ezise- Valmorel namaphethelo